उपसभापति पाउने भएपछि सुजाताको रामचन्द्रलाई समर्थन गर्ने
२० फाल्गुन २०७२
२०, फागुन काठमाडौँ । पार्टी सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी सुजाता कोइरालाले रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेद्धवारी फिर्ता लिएकी छिन् । पौडेलसँग तीनबुँदे सहमतिपछि सुजाताले उम्मेद्धवारी फिर्ता लिएकी हुन् । विधान संशोधनपछि महिला उपसभापतिको प्रावधान राख्ने र त्यसमा सुजातालाई जिम्मेवारी दिने पौडेलले सहमति जनाएपछि सुजाता पौडेललाई समर्थन गर्न तयार भएकी हुन् । त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुजाताले सिफारिस गरेका पाँच केन्द्रीय सदस्य राख्न पौडेल तयार भएका…विस्तृत समाचार »
कांग्रेसबाट लोकतन्त्रको बलात्कार कहिलेसम्म ?
टिप्पणी/केशवराज जोशी नेपाली राजनीतिको वुढो रुख भनेर चिनिने कांग्रेस १३ औं महाधिवेशनको रमझममा छ । स्थापनाकालमा विरासतको पडाह वोकेर जन्मीएको कांग्रेस पछिल्लो समय कपास झै हलुको हुदै जान थालेको छ । नेपाली राजनीतिको मुलधारमा जहिल्यै पनि रहेको कांग्रेस कस्को कांग्रेस र के को कांग्रेस यो वहस अब पेचिलो बन्न जरुरी छ । कुनै समय कोइराला परिवार नै काग्रेस त कांग्रेस पार्टी नै कोइराला परिवार भन्ने…विस्तृत समाचार »
कांग्रेसको इतिहास फर्केर हेर्दा
२०, फागुन काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला १३ औँ महाधिवेसनमा छ । नेपालमा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने नारा फुक्दै नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो । हाल संसदीय दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । जननायक वी.पी. कोइरालाले २ अक्टुवर १९४६ मा पटनाबाट प्रकाशित हुने द र्सच लाईट पत्रिका मार्फत भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीहरूको अखिल भारतीय संगठन…विस्तृत समाचार »
समातिमा उमेद्वारी घोषणा गरेकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले उमेद्वारी फिर्ता लिने भएकी छन् । बुधबार सभापतिमा उमेद्वारी घोषणा गरेकी कोइरालाले २४ घण्टा नबित्दै उमेद्वारीफिर्ता लिन लागेकी हुन् । उनले आफ्नो निबास मण्डिखाटारमा अहिले केहिबेरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उमेद्वारी फिर्ता लिन लागेको उनी निकट स्रोतले न्यूजसेवालाई बतायो । कांग्रेसमा कोइराला खानदानको बिरासत लिनको लागी उमेद्वारी घोषणा गरेकी कोइरालाले संस्थापन पक्षबाटै तीन गुट हुने भएपछि उमेद्वारी फिर्ता…विस्तृत समाचार »
२०,फागुन,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनआजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । दिउँसो १ बजे खुलामञ्चमा पार्टी कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । ‘सुशीलको नेतृत्वमा बनायौं संविधान, समृद्ध राष्ट्र निर्माण अब हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुन लागेको महाधिवेशन चार दिनसम्म चल्नेछ । झण्डै सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक यात्रा तय गरेको कांग्रेसले साढे १ वर्ष ढिलो महाधिवेशन गरेको हो । …विस्तृत समाचार »
कांग्रेस महामन्त्रीका प्रत्यासीः कस्को औकात कति ?
१९, फागुन काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिबेसन बिहिबारबाट काठमाडौमा हँुदैछ । महाधिबेसनमा विभिन्न पदमा विभिन्न प्यानलबाट आफ्नो आफ्नो उमेद्धवारी दिनेक्रम जारी छ । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदकालागि शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट अर्जुननरसिंह के।सी, रामचन्द्र पौडेलको प्यानलबाट सशांक कोइराला र कृष्ण सिटौला प्यानलबाट गगन थापा मैदानमा लड्दै छन् । यी तीनै नेता राजनितिक वृत्तमा शक्तिशालीका रुपमा चिनिन्छन् । यी तीनमा अर्जुननरसिंह के।सी कांग्रेसका पाका र…विस्तृत समाचार »
त्रिभुवन विमानस्थलमा सिआइबीको छापा, एयर राइफल फेला
१९, फागुन काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारमा छापा मारेको छ। छापा मार्ने क्रममा सिआइबीले बन्दुक फेला पारेकोडिआइजी नवराज सिलवालले जानकारी दिए । त्यो हतियार इजरायलबाट आएको तर कसले ल्याएको भन्ने विषयमा केही खुल्न सकेको छैन् । सिल प्याक गरेको अवस्थामा सिआइबीले एयर राइफल फेला पारेको हो । सिआइबीले भन्सार कार्यालयको गोदाममा रहेका सामानहरुका बारेमा पनि जानकारी लिएको छ । विस्तृत समाचार »
कांग्रेस सभापतिका प्रत्यासी : कस्को औकात कस्तो ?
एलिजा उप्रेती, १९ फागुन काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १३ औ महाधिबेसन बिहिबारबाट काठमाडौमा हुदैछ । महाधिबेसनमा विभिन्न पदमा विभिन्न प्यानलबाट आफ्नो आफ्नो उमेद्धवारी दिनेक्रम जारी छ । यसैबिचमा कांग्रेस सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल ,शेरबहादु देउवा, कृष्ण प्रसाद सिटौला र सुजाता कोइरालाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन । सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका यी चार नेतामध्ये कुनचाँहि नेताले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नेछन् त्यो महाधिवेसनको नतिजाले बताउनेछ । कांग्रेस सभापतिमा…विस्तृत समाचार »
सन्दर्भ काग्रेंस महाधिवेशन: सामुहिक नेतृत्व र संस्थागत निर्णय प्रकृया आवश्यक
चम्फासिंह भण्डारी नेपाली काग्रेंस अहिले महाधिवेशनको संघारमा रहेकोछ र आगामी नेतृत्वको वारेमा ब्यापक बहस शुरु भएकोछ । नेपाली राजनीतिमा स्थापनाका हिसावले पुरानो, आकारका हिसावले ठूलो र दर्शन, विचार र मान्यताका हिसावले प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा आम मुलुकवासीको चासो बढ्नुलाई अस्वभाविक भन्न सकिदैन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिलाई अलग राखेर हेर्दा नेपाली काग्रेसको नेतृत्व वि.पि. कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुदै सुशिल कोइरालाबाट पहिलो…विस्तृत समाचार »
विदेशीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनु राष्ट्रियता विरुद्ध भएको भन्दै रिट दायर
१९,फागुन,काठमाण्डौं । नेपाली काग्रेसको १३ औ महाधिवेशनमा नेपाली नागरिकता त्यागेर विभिन्न मुलुकका नागरिक बनेकाहरुलाई जनसम्पर्क समितिको नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको विषय राष्ट्रियताको मान्यता विपरित भएको भन्दै प्यूठानका धु्रब गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन । बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गौतमले काग्रेससहित विभिन्न दलहरुले चन्दाको प्रलोभनमा नेपाली नागरिकता त्यागीसकेका गैरआवासीय नागरिकहरुलाई प्रतिनिधि बनाउँदा त्यसले राष्ट्रियताको मुल आर्दशमाथिनै प्रहार गरेको भन्दै यसलाई…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1177 1178 1179 1180 1181 Older Last ›